“သူတို့နှစ်ဦး လွတ်မြောက်လာသည်အထိ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်သွားမယ်” – ရိုက်တာ အမှုဆောင် အယ်ဒီတာ
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သတင်းထောက်နှစ်ဦး လွတ်မြောက်လာရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ သတင်းအေဂျင်စီက ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် အဆိုပါဖမ်းဆီးမှုက မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီဒီယာလောကအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ရိုက်တာ၏ အမှုဆောင်အယ်ဒီတာ Mr Reg Chua က Frontier မှ သောမတ်စ် ကင်း(န်)နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုဝလုံးနဲ့.
ဖမ်းဆီးခံ သတင်းထောက်များကိစ္စ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာထည့်ခွင့်မရ
ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲက သတိပြုမိတဲ့ အချက် ၇ ချက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း နောက်ဆုံးနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ရောင်းချတဲ့ နှစ်လယ် မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကို နေပြည်တော်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ကနေ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါပြီ။ ဒီပြပွဲမှာ သတိပြုမိခဲ့တဲ့ အချက် ၇ ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ကျောက်စိမ်းသာ အဓိက ကျောက်မျက်ပြပွဲလို့ ခေါ်ဆိုပေမယ့်.
ပဲခူးမြို့တွင် KFC Junior ဆိုင်ခွဲ ဖွင့်လှစ်
အမေရိကန် အမြန်ဝန်ဆောင်မှု စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည့် KFC က ပဲခူးမြို့တွင် ၎င်း၏ ပထမဆုံး ဆိုင်ခွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ အဆိုပါဆိုင်ခွဲသည် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ငါးဆိုင်မြောက်ဆိုင်ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၁၉ ဆိုင်မြောက် ဆိုင်ခွဲလည်းဖြစ်သည်။ “လူဦးရေ ၄ သန်းကျော်နေထိုင်တဲ့ ဒီပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့.
ရန်ကုန်မြို့ပြ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို သုံးရက်ကြာ ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်မြို့ပြ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမပေါ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သုံးရက်ကြာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
နမ့်ခမ့်မြို့နယ် ကျေးရွာတစ်ချို့တွင် ဆန်ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲနေ
တပ်မတော်နှင့် TNLA တို့အကြား စစ်ရေးတင်းမာနေမှု ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ့်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာတချို့တွင် တပ်မတော်က လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားရာ ဆန်ဝယ်ယူရန် ခက်ခဲနေသည်ဟု ဒေသခံအချို့က ပြောကြားသည်။
ရခိုင် တိုင်းမှူးဟောင်းကို အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်အရေးယူ
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို တာဝန်ယူရတဲ့ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဟောင်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်စိုးကို ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမယ့်စာရင်းမှာ အမေရိကန်အစိုးရက ထည့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
ဆရာဝန်၊ ဆရာမ ၂၀၀ ကျော်အား ဆီးချို၊ သွေးချိုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းပေးမည်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆေးရုံ ၄၄ ရုံမှ ဆရာဝန်၊ ဆရာမ ၂၀၀ ကျော်အား ဆီးချို၊ သွေးချိုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်တန်းပေးသွားမည်ဟု ဆေးသုသေသနဦးစီးဌာနမှ ညွန်ကြားရေးမှုချုပ် ပါမောက္ခ ဦးကိုကိုက ပြောကြားသည်။
ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးအမှုတွင် သတင်းမီဒီယာကောင်စီက ကြားဝင် ဖြေရှင်းပေးလို
ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ မိသားစုဝင်များအပြင် ဥပဒေအရ ကိုယ်စားပြု ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်သူများနှင့်ပါ တွေ့ခွင့်မရသေးသည့် ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ အမှုတွင် ကြားဝင်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရန် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီက အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။